Macluusha carruurta Djibouti - BBC Somali
Macluusha carruurta Djibouti
Warbixin uu soo saaray sanduuqa carruurta ee Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in caruurta dalka Djibouti badankoodu ay ku nool yihiin saboolnimo aad u ba'an, xaaladdaas oo carruurta ka dhigaysa kuwo laga faa'iidaysto laguna tacaddiyo.
UNICEF waxay sheegtay in marka saddex loo qaybiyo labo meelood carruurta dalka Djibouti laga duudsiiyay ugu yaraan mid ka mid ah xuquuqda aasaasiga ah sida hoyga, biyaha, caafimaadka ama nafaqada.
Hay'addu waxay intaas ku dartay in tiro ka badan kala bar aanay haysan guryo; dhulka miyiga ah tiradaasi waxay sare ugu kacaysaa sagaal ka mid ah tobankii carruur ahba. Nafaqo xumo ayaa uga sii daraysa xaaladda carruurta, ugu yaraan 28% carruurta da'doodu ka yar tahay shan sano waxaa haysa nafaqo darro aad u ba'an.